Indlu Izilwane ezifuyiwe zivunyelwe
Phakamisa amehlo futhi ujabulise indawo yazo yobuhle bezinhlanzi ezise-aquarium. Zingokwemvelo, zibe nesimo esiyingqayizivele, ngaphandle kwalokho zingakhula ama-ferns kanye nezihlahla. Ngomhlobiso onjalo wemvelo umhlaba wakho ongaphansi kwamanzi uzobonakala unemvelo. Ngingaphi lapho ngithola khona i-snag yemvelo emanzini? Indlela engcono kakhulu ukuthola ukuthola okomisiwe futhi ngokucophelela kufakwe emzimbeni othile wamanzi impande noma impande. Kubaluleke kakhulu ukuthi i-koryak ibe yomile, ifile, okungukuthi, yayingenayo izinto, imigebe, eyingozi emvelweni wamanzi. Uma unenhlanhla ukuthola i-snag enhle yesimo esiyinkimbinkimbi, kufanele ilungiselelwe umhlobiso.
Indlela yokucubungula i-snag ye-aquarium?
Okokuqala udinga ukuyihlanza kokungcola nokugcoba, ususe zonke izindawo ezibolile. Thola ukuthi ngabe i-driftwood ifaneleka yini i-aquarium ngobukhulu, ukusika okungenakuqhathaniswa. Khona-ke udinga ukuthatha ibhodlo elikhulu futhi ufake i-snag kulo, uthele wonke amanzi bese ulibeka emlilweni. Engeza usawoti ngokubala kwe-1 kg ngamalitha angu-10 amanzi. Pheka i-snag cishe amahora angu-10-12, wanezela amanzi njengoba iqhuma. Emva kokucubungula izinkuni ze-aquarium ngokubilisa usawoti, kufanele kufakwe ngaphansi kwamanzi noma embizeni yamanzi. Kulesi simo, amanzi kufanele ashintshwe njalo amahora angu-10-12. Ngemuva kokwelashwa okunjalo, izinkukhu zokudoba ngeke zibole, isikhunta, futhi kulula ukuphonsa phansi.
I-Mangrove i-snags e-aquarium
Ukuhlobisa okunjalo, njengokubusa, kuthengwa esitolo. Ama-mangroves alubomvu, amnyama namhlophe ayaziwa. Isetshenziswa emanzini amanzi namanzi olwandle . Lezi zinhlayiya zinzima kakhulu, ngakho-ke azidingi ukuhamba. Kungcono ukuwabeka njengoba bekhula emvelweni - i-rhizome kuya phansi. I-Mangrove i-snags e-aquarium igcwalisa amanzi ngama-acids e-humic, iyenzisa ngokucophelela futhi idale "umphumela wamanzi omnyama" omuhle echibini.
Umklamo we-aquarium nge-snag
Uma usuqedile ngezinto zokuhlobisa: ungaqhubeka nomklamo. Ukwakhiwa kwe-aquarium ne-driftwood kungenziwa ngezihumusho ezimbili:
I-snag igonywe emanzini ngokuphelele;
i-tip of the driftwood iphuma emanzini.
Ukudala ukwakheka okuphelele ekwakhiweni kwe-aquarium nge-snag esetshenziselwa futhi isihlabathi, amatshe, izitshalo eziphilayo noma eziphilayo, izihlahla . Ukulondeka i-snag emanzini angasetshenziswa ngokuyinhloko, ngendlela yegquma, eboshwe ngamatshe ahlukahlukene ukuze kube nokuzinza. Ukhetho lwesibili lufanelekile kakhulu emanzini amaningi, ukubeka izinkomo ngaphansi kwe-aquarium yonke.
Ngifuna ukuqaphela, uma sihlobisa i-aquarium nge-driftwood, asiyona nje into ehlobisa, kodwa sakha indawo yokukhosela kanye nomthombo wokudla kwemvelo kwabakhileyo emhlabeni ongaphansi kwamanzi.
Ukuzalwa kwamakati exot
Kanjani ngokunembile ukupha onogwaja?
Indlu yekati ngezandla zabo
I-LED Aquarium Lighting
Indlela yokunquma yobudala be-tortoise yomhlaba?
Yehla izintambo ngezinja
Shaverma eSt. Petersburg
Bangakwazi ukugqokelwa ephaketheni lakho: TOP 10 emikhakheni encane kakhulu yamakati
I-Museum of American Folk Art
Ungabiza kanjani uJack ongenalutho?
Izinkomba ezenziwe ngokhuni
Ukwelashwa kwe-pyelonephritis kwabesifazane - izidakamizwa
Izinkokhelo zikaMbusi wengane yesithathu
Indlela yokupompa ithanga langaphakathi?
Ifenisha ye-Loggia - indlela yokukhetha ukhetho olusebenza kakhulu?
Izigqoko zenziwe nge-chintz kwabesifazane abagcwele - ukukhethwa kwezingubo ezifashisayo futhi ezinhle kakhulu
UKara Delevin wayefuna ukuzibulala
Ungadli ngemuva komphumela we-6
"Umoya wesibili" - uyini "umoya wesibili" ezemidlalo nokuthi ungawuvula kanjani?
I-Jelly kusuka ku-cranberry
Izindawo zokudlela zeVladikavkaz
© 2021 zu.everaoh.com